SomaliTalk.com » Stockholm: Wasiiru-dowlaha Dimoqraadiyada & arimaha Federaalka Puntland oo ka qayb galay shirweyne
Waxaa magaala madaxda wadanka Sweden ee Stockholm ka dhacay taariikhdu kolkii ay ahayd 9-ka november 2009-ka, shirweyne uu kasoo qayb galay Wasiiru-Dawlaha Dimoqaraadiyeynta & Arrimaha Fedaraalka ee dowlad goboleedka puntland, H.E Abdi Hassan Jimale.
Halkan ka daawo sawiro dheeraad ah | Qaybta labaad
Dr jimcaale waxaa wasiirnimada u dheer isagoo ka mid ah aqoonyahanda soomaaliyeed,wuxuuna haystaa shahaadada PhD ee sharciyada. Shirkan waxaa la qorsheynaayey inuu kasoo qayb galo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland, Dr C/raxman faroole. Balse howlo qaran oo muhiim ah awgood waxaa suurto geli weydey inuu madaxweynuhu kasoo qayb galo shirkaas. Sidaas darted ayaa madaxweynuhu waxaa uu shirka usoo wakiishay Muddane Abdi Hassan jimale oo ah Wasiiru-Dawlaha Dimoqaraadiyeynta & Arrimaha Fedaraalka ee dowlad goboleedka puntland.
Hayàdaha shirkaan waxka suurto geliyey kana soo qayb galay waxaa ka mid ahaa Hay’adda Soo Dhaweynta Soo-galootiga (Migrationsverket), hayàda horumarinta iyo kobcinta ganacsatada yar-yar. Ka qaybgalyaasha waxaa kaloo ka hayàda kaalmada dibada ee SIDA, Gudi dowli ah oo horumar ku sameeya sidii loo suurto gelin lahaa loona fududeyn lahaa dhaq-dhaqaaqa dadka soogalootiga ah ee ku dhaqan sweden, Sanduuqa Maalgalinta Sweden (Swedfund) iyo qaar ka mid Jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan Sweden iyo jaaliyada puntland ee Norway. Waxaa kaloo shirka kasoo qayb galay dad dhalashadoodu iswiidhish tahay oo daneynaaya arimaha ganacsiga.
skirkado khaas ah oo ku hawlan arrimaha horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha. Hayàdahaas qaarkood ayaa ku howlan sidii loo suurto gelin lahaa hirgelinta maalgashi lagu kalsoonaan karo oo ay ka qayb qaataan Soomaali iyo weliba ajnabi oo lagu sameeyo gobolada Puntland
Qabanqaabada iyo suurtogelinta shirka
Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey shirkadda Multiling Co. Ltd ( www.Multiling.se ) oo fadhigeedu yahay Magaalada Umeå ee waqooyiga dalka Sweden oo ay ku bahoobeen dad dhalashadoodu tahay Swidish iyo Soomaali. Shirkaddan oo iyadu ah midda soo qabanqaabisay shirkan, isla markaasna martiqaadka u fidisay wasiirka Dimoqaraadiyeynta & Arrimaha Fedaraalka ee dowlad goboleedka puntland iyo madaxa Bangiga lagu magcaabo Dayax Islamic Bank, mudane Xasan Cumar Ahmed iyo weliba madaxda hay´daha kaleba, ayaa iyadu ka shaqaysa arrimaha horumarinta ganacsiga, arrimaha is dhexgalka iyo horumarinta bogagga (hoyga) internetka oo ku shaqeeya luuqado kala duwan. Shirkanu wuxuu qayb ka yahay mashruuc ay shirkaddu ka waddo waddankan Sweden oo ujeedadiisu tahay sidii horumar dhanka ganacsiga ah loo gaarsiin lahaa dadka soomaalida ah oo ku nool waddankan Sweden, iney dhaqdhaqaaqa ganacsi ka abuuraan sweden iyo soomaaliya. Mashruucaas waxaa lagu magacaabaa rajo. www.rajo.se
Shirka waxaa lagu lafaguray arimo dhowr ah oo aad muhiim u ah. Arimahaas waxaa ka mid ahaa,Sare u qaadista arimaha dimoqraadiyada, adkaynta nabadgelyada iyo sidii ay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan Sweden uga faa`iideysan lahaayeen dalkoodii hooyo, waxqabkiisana qayb libaax uga qaadan lahaayeen.
Qodobada kale oo lagu falanqeeyey shirka waxaa ka mid ahaa siyaabaha tamarta looga dhaliyo cadceeda iyo dabeysha, taas oo haddii guul laga gaaro wax weyn ka tari karta horumarka warshadeynta. Horumarka wershedaha yar-yar iyo kuwa waaweynba waxaa ay kor u qaadaan horumarka wadanka iyo weliba abuuritaanka shaqooyin. Arimaha kale ee shirka lagu looga baaraan degey waxaa ka mid ahaa habka loo horumarin karo qaabka bangiyeynta ee la jaan qaadi kara bangiyada aduunka ee caalamiga ah, arrintaasoo uu soo bandhigay maamulaha sare ee Bankiga Dayax Islamic Bank.
Arinta kale ee muhiimka ah ee shirka lagu soo qaatay waxaa ay ahayd kor u qaadista waxbarashada da´yarta reer Puntland ee ku salaysan qaabka wax looga barto internetka.
Kolkii uu shirku soo gabagaboobey wuxuu uu Wasiirku hoteelkiisa ku qaabilay qaar ka mid ah Jaaliyadda reer Puntland ee deggan waddanka Sweden. Jaaliyadu waxaa ay ka qayb qaadatay siminaarkii maalinnimada ee lagu falanqeynaayey arimaha aan kor kaga soo hadalay. Dadkaas waxaa ka mid ahaa ganacsato iyagu danaynaya inay ganacsigooda ballaariyaan,doonayana bal iney wax ka ogaadaan siyaasadda Puntland ee ku aaddan soo dhoweynta qurba joogta iyo sidii ay u maal gashan lahaayeen dalkooda..Taasi waxaa ay qayb muhiim ah ka ahayd arimihii uu Wasiiru-Dawlaha Dimoqaraadiyeynta & Arrimaha Fedaraalka Puntland Dr. Jimcaale ku soo qaatay khudbadii uu ka jeediyey shirkii maalinlaha ahaa.
Dr. Jimcaale waxaa kale oo uu maalmaha inagu soo fool leh shirar kala duwan la qaadanaya Saraakiisha Wasaaradda Arrimaha Dibadda, hayàda kaalmada dibada ee SIDA (Swedish International Agency), Agaasimaha Hay’adda Dikaonia-Sweden iyo sidoo kale saraakiil isugu jirta kuwa dawladeed, Sharikado iyo Hay’ado madaxbannaan.